UHAMBO LWE-BIZ LULUNGILE # 2 - I-Airbnb
UHAMBO LWE-BIZ LULUNGILE # 2
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguVickram
🌈🌟☀️Eli ligumbi labucala eliqaqambileyo, eliphangaleleyo, elisanda kulungiswa kunye nebhafu encanyathiselweyo ebekwe kakuhle kwaye ebekwe kwiflethi ebekwe kakuhle Isakhiwo esikhuselekileyo kwindawo yentengiso enofikelelo olulawulwa yikhamera yevidiyo .👑👩‍👩‍👦 👨‍⚕️👩‍⚕️, ugcino lwendlu / ukucoca ubuncinane kahlanu ngeveki .Ubungqina bengcongconi. 🍝🥗🍚🍛Ikhaya elinobukhazikhazi eliphekwe "inkonzo kadabba" lifumaneka kwindlu esebumelwaneni.
Le yindlu enamagumbi amabini okulala, yenziwe ngobumnandi kakhulu ukulungiselela iindwendwe.Noko kunjalo igumbi elinye kuphela elinegumbi lokuhlambela labucala elikhoyo. Igumbi lokulala lesibini likwanikezelwa njengoluhlu olwahlukileyo, kwaye indlu epheleleyo nayo iyafumaneka kwakhona njengoluhlu olwahlukileyo. Zonke izinto eziluncedo zale mihla zinikiwe .Ukugcinwa kwendlu kwenziwa yonke imihla. Ilinen ecocekileyo ecocekileyo ibonelelwa kuzo zonke iindwendwe. Ukuhlala ixesha elide ilinen iya kutshintshwa kabini - ngeveki. Iindwendwe ziyacelwa ukuba zingalungiseleli amatheko okanye iindibano kwizakhiwo , kwaye zigcine umculo neengxoxo zikwivolumu ephantsi. Ikhitshi likhona ngezinto ezisisiseko ezifana negesi yokupheka - phezulu , i - microwave , i - oveni kunye nefriji .Nceda uqhagamshelane nathi malunga nohlobo olunoboya , njengoko iindwendwe kwelinye igumbi zisenokungakhululeki.Kuya kubakho intlawulo eyongezelelweyo yezilwanyana zasekhaya.
I-Kanchan Galli yindlela yokufikelela "kwi-Hanuman Tekri" eyona ndawo ifunwa kakhulu emva kwenduli yePune. ULondolozo lweeFilimu, iFilimu kunye neTV Institute, iBhandarkar Institute, iSymbiosis SB Road Campus kunye ne-ILS Law College kukuhamba okufutshane. Zininzi iindawo zokutyela ezilungileyo kwindawo ekufutshane ezihambisa ukutya ngaphandle kweCCD, iBarista kunye neCoffee Republic.
Umbuki zindwendwe ngu- Vickram
Ndihlala ndifumaneka kwiselula yam nakwi-intanethi , nangona ndihlala eMumbai . Nangona kunjalo udadewethu ( SHEELA Narayan ) kunye nosapho lwakhe bahlala kwigumbi elingezantsi kwisakhiwo esinye . Ziyafumaneka kuyo nayiphi na into yokwenza izigqibo kwindawo njl.njl.
Ndihlala ndifumaneka kwiselula yam nakwi-intanethi , nangona ndihlala eMumbai . Nangona kunjalo udadewethu ( SHEELA Narayan ) kunye nosapho lwakhe bahlala kwigumbi elingezantsi kwi…